Umlando embonini yezimoto has kwaqala kufike emuva njengoba 1768, lapho design lokuqala umusi Inamandla, yayikwazi ukuthwala abantu futhi imoto. Ngemva eside kweminyaka engu-38, izwe wabona imoto yokuqala nge injini amandla omlilo. Sekungamashumi eminyaka INcwadi Yonyaka, umqondo ekukhiqizweni izimoto kwakubonakala nakancane, futhi namuhla ukuthenga imoto izimo zivuma cishe wonke umuntu.
Nokho, imoto yesimanje - akusiyo nje izindlela zokuhamba, okwenza ukuphila kwethu kulula futhi kangcono, lena isici esiyinhloko isitayela, Imfanelo esisemqoka impumelelo nokuchuma, futhi ngaphezu - usizo okuphawulekayo ukudalwa isithombe kwezobuciko.
izimoto zesimanje brand owaziwa ngokwethukela ekubeni amaqhawe ukuqopha. Ngezinye izikhathi ngisho imodeli movie kubonakala ngaphambi show auto njengoba imoto umqondo. Ngakho, ngokwesibonelo, kwenzeka nge movie "weMinority Umbiko", njengoba Lexus isampula kude 2054 yasungulwa ngqo ifilimu, futhi kuphela ke esethulwa emihlanganweni Motor Show Paris. Kuyinto real Lotus imoto Exige S1 ngokuvumelana simo liphendulwe amphibian futhi wasiza edume James Bond nilwe abathumbi ka ngwenya British futhi Russian.
Phakathi, ngisho umuntu ovamile kakhulu owaziwa emgwaqweni, kude umkhakha imoto emisha - i-Batmobile ziyaphawuleka, okuyinto ephethwe ukudlala izimoto ezimbalwa futhi cishe imoto lwezinhlangano ezingathandwa ezibhekwa Fantomas (Citroen DS21), okuyinto lula ngokulinganayo ukuze ubhekane ngokuphumelelayo nalesi simo futhi emanzini futhi emoyeni.
Okunethezeka Jaguar C-uhlobo umzimba nge-aluminium ultra-engasindi, eyakhululwa iwuhlelo elilinganiselwe 53 amakhophi - hero of the ifilimu adumile "12 Ocean sika".
Yiqiniso, izinkanyezi kwesikrini movie cishe njalo uthole izimoto kusuka Melika, abese ngemali eshisiwe enhle abaqoqi kanye abashisekeli embonini yezimoto.
Ngokwesibonelo, izimoto Aston Martin ngenxa wedwa yayo ngokuvamile babe protagonists amafilimu kanye namavidiyo. Model DB III kwaba imoto siqu omunye heroes kule noveli lwesikhombisa mayelana James Bond. Ngo nokudutshulwa ka 2006 Bond sokuhlaziya kakade Aston Martin DBS nge spetskraskoy Casino Ice, eyakhululwa ngo isamba amayunithi 300.
ODE Sinemibandela zobuciko ngezimoto ziye zaba ingxenye movie "Fast and Furious", iningi wabheka kuphela ngenxa yobuningi izimoto esiyingqayizivele ngiyiswe khona. Abalandeli-imisipha izimoto Tuning abalandeli izimoto Japanese futhi European, uyonikwa okwengeziwe uthanda ingxenye yesine ka-movie. Kugcine "Fast and Furious kwathiwa 'wajabulisa izilaleli onobuhle elikhulu kangaka like the Lexus le LFA, Dodge le Ishaja wamaphoyisa Interceptor, Subaru Sti nabanye abaningi.
Thenga imoto, okuyinto isibe protagonist ifilimu akukhuthazwa - iphupho zonke umshayeli!
Ixhuma protivotumanok nge udlulisela: isikimu, igxathu negxathu Umhlahlandlela
Self Isikhathi ibhande esikhundleni
Buyekeza: "Lada Vesta" 2015
"Teopeka" (300 mg): yokusetshenziswa, izinkomba, umkhiqizi
Qamba Fern zilwane. Amagama lezitho izakhiwo of a Fern
Umlingisi Ivan Nikolayev: Biography, umsebenzi kanye nokuphila siqu
Umthandazo ngaphambi kokusebenza - kufanele kube njani?
Ibinzana Korean nge translation and Ukukhiphela. amazwi yaseKorea. Basic imishwana-Korean ukuzijabulisa nabanye
Violet Macho: isithombe kanye nencazelo ezihlukahlukene
Enterococci endaweni smear. Akufanele yini nathi esabe?